एशियाली देशहरुको भ्रमण ट्रम्पकालागि ‘हात लाग्यो शून्य’, शक्ति र प्रभावमा कहाँनिर चुके ट्रम्प? :: BIZMANDU
एशियाली देशहरुको भ्रमण ट्रम्पकालागि ‘हात लाग्यो शून्य’, शक्ति र प्रभावमा कहाँनिर चुके ट्रम्प?
प्रकाशित मिति: Nov 13, 2017 5:07 PM
काठमाडौं। एशियाली देशहरुको भ्रमणमा निस्केका ट्रम्पले अहिलेसम्म पाँच देशको यात्रा गरे। तर यी देशहरुको भ्रमणमा राष्ट्रपति ट्रम्पको ब्यबहारले अमेरिकी प्रभावबारे केही स्पष्ट संकेत भने गर्न सकेन। ट्रम्पकै ब्यबहार केही बिरोधाभाषपूर्ण पनि देखियो।
हाल ट्रम्प आसियान बैठकमा भाग लिन फिलिपिन्समा छ्न् र यहीबाटै उनले एशिया टुर समाप्त गरी अमेरिका फर्कनेछन्। तर यसपटकको भ्रमणले एशियाली देशहरुमा ट्रम्पको आर्थिक तथा बिदेश नीति कमजोर भएको बिज्ञहरुको धारणा सार्वजनिक भैरहेका छन्।
ट्रम्प जहाँ जहाँ गए त्यहाँ उनको भब्य स्वागत भयो। ट्रम्पलार्इ आफ्नो तारिफ सुन्न अति नै मन पर्छ। बिदेशी भूमिमा ट्रम्पलार्इ राजालार्इ जस्तै स्वागत गरियो भने उनी पनि बिनम्र पाहुनाको रुपमा प्रस्तुत भए।
जब उत्तर कोरियाका राष्टपति किम जोङ उनले ट्रम्पलार्इ ‘असामान्य’ भनेर बारम्बार मजाक उडाए । ट्रम्पले पनि जबाफमा उनलार्इ ‘होचो’ र ‘मोटो’ भन्दै जिस्क्याए। यात्राका क्रममा देखियो ट्रम्पलार्इ हरेक देशका नेतृत्वले सतर्क भएर भद्र र राम्रो तरिकाले अतिथिलार्इ गर्नुपर्ने सबै किसिमले स्वागत गरे।
उनीहरु यस बारेमा बिशेष सचेत देखिएका थिए कि उनीहरुको क्रियाकलापबाट ट्रम्प भड्किने अवस्था सिर्जना नहोस्। उनीहरु तारिफको पुल बाँधेर ट्रम्पलार्इ बिदा गर्न चाहन्थे किनकी उनीहरु कोहीपनि अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्ने मुडमा थिएनन्।
जापानी प्रधानमन्त्री सिंजो आबेले भने गल्फ खेल्नका लागि ट्रम्प उनका मिल्ने पार्टनर हुन्।
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले ट्रम्पलार्इ आफूले अमेरिकालार्इ धेरै पहिलेदेखि महान भनिरहेको बताए। सोलको नेशनल एसेम्ब्लीमा नै मुनले ट्रम्पलार्इ ‘विश्वनेता’ भनेर परिचय गराए।
हनोइमा स्वागत समारोहपछि ट्रम्प भियतनामका राष्टपतिका साथै उभिए तर उनले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार कार्यकर्ता तथा ब्लगरहरुलार्इ गरिएको गिरफ्तारीबारे एक शब्दपनि बोलेनन्। बेइजिङमा उनी राष्ट्रपति शी जिनपिंङका साथ उभिए तर उनले आलोचनाका एक शब्दपनि खर्च गरेनन्।
चीनको भ्रमण ट्रम्पको लागि थोरै अलग भने थियो। चीनमा शी जिनपिङले ट्रम्पको तारिफ गरेनन्। उल्टै ट्रम्पले गरे। चीनमै ट्रम्पले आफ्नी नातिनीले चीनको मंडारिन भाषामा गीत गाएको एक भिडियो क्लिप सार्वजनिक गरे। ट्रम्पले शीलार्इ ‘स्पेशलपर्सन’ भन्दै चीनका जनताले उनीमाथि गर्व गर्ने बताए।
ट्रम्पलार्इ निराश पार्नका लागि यति नै काफी छ कि चीनमा यस्तो केही पनि भएन जसले गर्दा ट्रम्पलार्इ तारिफको बदला तारिफ मिलोस्। बेइजिङले यस्तो कुनै मौका दिएन जहाँ ट्रम्पले ‘विश्व नेता’ भएको महसुस गर्दै गर्व गरुन्।
आफ्नो उपलब्धीका रुपमा ट्रम्पले भियतनामको नाम लिन सक्छन् जहाँ उनले भ्रमणताका धेरै नै हल्लीखल्ली भयो।
एपेक समिटमा उनले चीनको नामै नलिइकन ब्यापारका लागि गलत तौरतरिका अपनाउने देशहरुको आलोचना गरे। अमेरिका यस्तो किसिमका कुनै पनि फाइदा लिने नगरेको उनले बताए।
यहि सम्मेलनमा ट्रम्पपछि बोल्ने पालो परेका चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले भने टेक्नोलोजी, जलवायू परिवर्तन, इन्नोभेसन जस्ता टपिकमाथि बोले। यसअघिका सम्मेलनहरुमा हुने बहसको विषय अमेरिकी राष्ट्रपतिको अपेक्षा अनुसारको हुने गरेको थियो। यसै कारण शायद ‘अमेरिका फर्स्ट’ भन्ने नीति थियो।
तर यसपटक यसको उल्टो भैदियो। अमेरिकाको आँखाबाट हेर्ने हो भने यो उसको बिदेश नीतिमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हो। अब यशियाली भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले कुन कुन देशहरुसँग गोप्य रुपमा के कस्ता शर्त र सम्झौताहरु गरेका छन् यसमा मात्र यसपटकको भ्रमणबाट अमेरिकाले लिने फाइदा निर्भर गर्छ।
विज्ञहरुका अनुसार ट्रम्प यो राम्ररी बुझेका छन् कि चीनसँग उसले सम्बन्ध बिगार्नु भविष्यमा निकै हानिकारक हुन जानेछ। चीन भ्रमणका क्रममा दुर्इ नेताहरुको मुस्कान र भद्र ब्यबहार त सबैले देखेका छन् तर यही मुस्कान पछाडिका चाल र शर्त सम्झौताहरु भने धेरै गम्भीर भएको अनुमान पनि भैरहेका छन्। ट्रम्पले साउथ चाइना सीको बिषयमा मध्यस्थताको कुरा उठाउनुले यस कुराको पुष्टि भएको बिज्ञहरुको भनार्इ छ।
तथापि साउथ चाइना सीको बिषयमा अमेरिकाले अहिलेसम्म कुनै ‘स्ट्याण्ड’ भने लिएको छैन। तर अमेरिका बिना कुनै रोकटोक आउनेजाने अधिकार पाउनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको छ र यहि कुरा चीनलार्इ मन परिरहेको छैन। रणनीतिक रुपमा अमेरिका यो कहिल्यै पनि चाहँदैन कि साउथ चाइना सी क्षेत्र सैन्य उपस्थितीबाट प्रभावित होस्।
विज्ञहरु भन्छन्- ‘शक्तिका हिसाबले चीन र अमेरिकाको बराबरी हुन सक्दैन। तर यो भ्रमणबाट स्पष्ट देखिएको छ अमेरिकाको शक्ति र प्रभाव पहिलेजस्तै छैन, निकै घटेको छ।’
एशियाली देशहरुको भ्रमण ट्रम्पकालागि ‘हात लाग्यो शून्य’, शक्ति र प्रभावमा कहाँनिर चुके ट्रम्प? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।